Semalt: Amawebhusayithi e-WordPress Izinhlobo Ongayakha
I-WordPress ingenye yezinhlelo eziphathekayo zokuphathwa kokuqukethwe futhi kusiza ukwakha amawebhusayithi asemthethweni nebhulogi. Ngokusekelwe kuzibalo zakamuva, i-WordPress isetshenziselwa amabhulogi angaphezu kwamashumi ayisikhombisa namaprosesa wewebhu emhlabeni jikelele. Ngaphambi kokwakha isayithi, uzodinga igama lesizinda nokubamba. Ekugcineni, wonke amathuluzi atholakalayo, ama-themes, nama-plugin azokuvumela ukuba uthuthukise iwebhusayithi ehle kakhulu, kusukela kumabhulogi akho kuya kumabhizinisi athandwayo adumile.
U-Oliver King, isazi esihamba phambili se Semalt , usikisela ukubuka izinhlobo zamawebhusayithi ongazisebenzisa usebenzisa i-WordPress.
1. Ibhulogi nesayithi lomuntu siqu
I-WordPress yaqala uhambo lwayo njengesikhulumi sokubloga ngokumane futhi sathuthuka ohlelweni lokuphatha okuqukethwe okunamandla. Eminyakeni embalwa edlule, amakhulu ezinkulungwane zamawebhusayithi namawebhulogi akhiwe nge-WordPress. Bakhululeke kakhulu, bavuthiwe futhi banolwazi kunanini ngaphambili futhi ungafunda okuningi kulawo mabhulogi. I-Wordpress inamathuluzi amaningi nezindikimba zokuzikhethela, futhi ungakwazi kalula ukuthuthukisa ibhulogi noma isayithi.
2. Iwebhusayithi Yebhizinisi
Kwabesomabhizinisi nemikhiqizo, i-WordPress iyindlela engcono kakhulu futhi elula kakhulu yokuthuthukisa amasayithi akhangayo angakapheli amaminithi. Cishe yonke imikhiqizo emikhulu nezinkampani sezivele zisebenzisa i-WordPress ukuze zisebenzise amasayithi abo njengoba zinika amathuba amaningi okukhulisa ibhizinisi labo.
3. I-eCommerce Websites
I-Wordpress isibe yisisombululo sokuhamba futhi yasiza ukwakha amasayithi e-commerce. Ama-plugin ayo awesome kanye nama-themes enza kube lula kuwe ukuthuthukisa amasayithi ozikhethelayo. Amanye ama-plugin adumile yi-WooCommerce, i-WPEcommerce, ne-Easy Digital Downloads, esiza ukuguqula isayithi lakho ibe yindawo yokusebenza ye-e-commerce esebenzayo ngokugcwele. Futhi kukusiza ukwamukela izinkokhelo ku-inthanethi, ukuphatha uhlu, izintela, ukuthumela, kanye namakhasimende akho ngaphansi kophahla olulodwa..
4. Ibhodi lomsebenzi
Uma ufuna ukuthuthukisa ibhodi lomsebenzi e-intanethi, ungazama iZwiPress. Amanye amawebhusayithi adumile afana ne-Problogger ne-Smashing Magazine asebenzisa i-WordPress ukuthuthukisa amasayithi amahle. Lolu hlelo lokuphatha okuqukethwe lusenza sikwazi ukudala amabhodi emisebenzi lapho abaqashi bengakwazi khona ukuthumela uhlu lwemisebenzi, futhi ochwepheshe bangasebenza ku-intanethi.
5. I-Business Directory
Njengebhodi lomsebenzi, kunesidingo esikhulu sezinkampani zebhizinisi, futhi i-WordPress inezinhlobo eziningi zamaphakheji wezincwadi zebhizinisi ongakhetha kuzo. Ungakha futhi izinkampani zewebhu ezingeke zikhawulwe ebhizinisini elilodwa.
6. I-Web & Umbuzo Wokuphendula
Uma ubheka ukudala iStack Exchange, version ye-Quora ne-Yahoo Answers, i-WordPress ingenza umsebenzi wakho ube lula. Hlanganisa lawa mathuluzi ahlukene wokuphatha okuqukethwe kanye nama-plugin futhi uqalise nomphakathi othuthukayo we-intanethi.
7. Amawebhusayithi angenaprofit and Religious
Nge-WordPress, kuyashesha futhi kulula ukudala izingosi eziphezulu ezingenzi nzuzo nezenkolo. Iqukethe amanye ama-plugin, futhi ungakwazi ukwengeza amafomu okunikela kanye nokuphakamisa imali kalula. Futhi, ungamukela iminikelo nge-PayPal, futhi konke lokhu kungenxa ye-WordPress.
8. Amawebhusayithi e-Portfolio
Uma udinga indawo engcono kakhulu yokubonisa iphothifoliyo yakho, kufanele uyifake kusayithi lakho le-WordPress. Lena kuphela uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe elikusiza ukudala imidwebo yezithombe ezimangalisa kanye nama-sliders amahle ukuze izwe likwazi ngobuciko bakho nethalenta.
9. Amakhuphoni Amawebhusayithi
Uma ufuna ukuthola ama-commissions ahlangene kusuka kumakhulu kuya ezinkulungwaneni zamasayithi anikeza izaphulelo ezikhethekile kwimikhiqizo namasevisi awo, kufanele udale iwebhusayithi yakho yekhuphoni bese uqala. I-Wordpress ikuvumela ukuthi ungeze, uphathe futhi uphelele amakhuphoni ku-intanethi. Ungahlola futhi uvote amakhuphoni akho, futhi konke lokhu kwenziwa ngephaneli ye-WordPress admin.
10. Izitolo ze-Auction
Uma ufuna i-website efana ne-eBay lapho izinkampani zithengiswa khona nsuku zonke, ungasebenzisa i-WordPress ukudala isayithi lakho le-auction eligcwele. Abasebenzisi bangabhadela, bakhokhele ngezinketho eziphephile futhi uzothola okuningi esiteshini sesitayela.